ဖြေရှင်းနည်းများ Attendance Management Solutions, လက်ဗွေအချိန်တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်, RS485 Interface အချိန်တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်, TCP / IP Interface Time တက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, အချိန်တက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ, Time Attendance Solutions, USB Interface အချိန်တက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများ
တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ F-i60T နှင့် F-i218 နှင့်အခြား Fingerprinter မော်ဒယ်များအတွက်သင့်တော်သည်.
ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်အမျိုးမျိုး: TCP / IP, RS485, စသည်တို့ကို.
Support large-capacity fingerprint recognition: 3000,10000,30000,50000 လက်ဗွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်.
ဘာသာစကားမျိုးစုံမီနူး: အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, ဗီယက်နမ်လူမျိုး, စပိန်, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, ဂျာမန်, ရုရှား, တူရကီ, အီတလီ, ခကျြခကျြ, Arabic အဘိဓါန်, Persian နှင့်အခြားဘာသာစကားများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်.
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Linux ကို
algorithm ဗားရှင်း: ကြည့်ရှုခြင်း 10.934အဓိကနည်းပညာ
ပြသ: 2.4inch TFT
လက်ဗွေဖော်ထုတ်ခြင်းမြန်နှုန်း: 0.5s ကို
Misjudgment မှုနှုန်း: ≤0.0001%
ဆက်သွယ်ရေး: TCP / IP, RS485, ယူအက်စ်ဘီ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: DC က 5V
standby လက်ရှိ: 220Ma
prompt ကိုအသံ: စကားသံကို prompt ကို
validation နည်းလမ်း: လက်ဗွေ, RFID ကဒ်, Passwords များကိုနှင့်အခြား 15 Modes သာမျိုး
machine language: ဘာသာစကားမြားစှာ (အင်္ဂလိပ်, ရိုးရှင်းသောတရုတ်, တရုတ်ရိုးရာ, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, ဗီယက်နမ်လူမျိုး, စပိန်, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, ဂျာမန်, ရုရှား, တူရကီ, အီတလီ, ခကျြခကျြ, Arabic အဘိဓါန်, ရှ optional ကို)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစိုထိုင်းဆ: 20%~ 60%
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအပူချိန်: 0℃ ~ + 45 ℃
၂.၄ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိ F-i60T လက်ဗွေပစ္စည်း, built-in Intel က 32-bit processor, ကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးပေါ် quad-core လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု၏တိကျမှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်. ဖောက်သည်များ၏မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်: RF ကဒ်, လက်ဗွေရာ, စကားဝှက်ကို, ဖော်ထုတ်ခြင်းမဆိုပေါင်းစပ်. TCP ကိုထောက်ပံ့သည် / IP protocol ကို, 100မြန်နှုန်းမြင့် M ကွန်ယက်, Cross-segment ကိုဒေတာလွှဲပြောင်းဖွင့်. အချိန်နှင့်တက်ရောက်မှုအချက်အလက်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်, တက်ရောက်သူအချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးတက်စေရန်တည်ငြိမ်သောကွန်ယက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအသုံးပြုခြင်း.
၀ န်ထမ်းအချိန်နှင့်တက်ရောက်မှုစနစ်သည်ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. အချိန်မှန်ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခြင်းနှင့်မျှတပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအချိန်နှင့်တက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုသက်ရောက်သည်, ဝန်ထမ်းစိတ်ဓာတ်, ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်, ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးထိရောက်မှု. ယခုများစွာသောကုမ္ပဏီများသည်တက်ရောက်သူနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုကြသည်: လာကြတယ်နာရီ, သံလိုက်ကဒ်များ, IC ကဒ်များ, အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ကတ်များ, ID ကိုကတ်များ. ဒါကြောင့်အချို့သောအခန်းကဏ္ play မှကစားနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်, အဆိုပါပြproblemနာကိုလည်းအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်: နာရီ ticking သည်အားစိုက်ထုတ်မှုများစွာလိုအပ်ပြီးကဒ်ပြားကိုစာရင်းအင်းနှင့်ပုံမှန်ပြန်လည်လဲလှယ်ရန် ၀ န်ထမ်းများစွာလိုအပ်သည်, သံလိုက်ကဒ်ကိုသယ်ဆောင်ရန်မေ့သွားရန်လွယ်ကူသည်, အရှုံး, ခိုးမှု, ကဒ်အသစ်များနှင့်အခြားပြissuesနာများထုတ်လုပ်ခြင်း . အခြေခံကျကျ, အထက်ဖော်ပြပါအချိန်နှင့်တက်ရောက်မှုနည်းလမ်းသည် ၀ န်ထမ်း၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်အခါ ၀ န်ထမ်း၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမစစ်ဆေးပါ, ဒါပေမယ့်ပစ္စည်းများ၏တရားဝင်မှုကိုစစ်ဆေးပါတယ်, ဒါကြောင့်လာကြတယ်ကဒ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်. စီမံခန့်ခွဲမှုလစ်ဟာမှုသည်မွေးရာပါဖြစ်သည်.
လူ့ခံစားချက်များကိုဖယ်ရှားရန် Fingerprint အချိန်နှင့်တက်ရောက်မှုစနစ်သည်မှားယွင်းသည်, ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းများအတွက်မလိုအပ်သောအချိန်ပိုချွေတာပါ, မျှတ။ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိပြီးထိရောက်မှုရှိစေရန်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းများ, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲမှု. လူ့လက်ဗွေများသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာနှစ်ခုရှိသည်: အားလုံးကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်တစ်သက်တာ, အိတ်ဆောင်အဆင်ပြေမှုနှင့်အတုမဟုတ်သောလုံခြုံရေးတို့ပါ ၀ င်သည်, လက်ဗွေ biometrics ဖော်ထုတ်ခြင်း၏ဤဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူပါတယ် , တိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားသာချက်များ. ၀ န်ထမ်းများသည်ကဒ်ပြားအမျိုးမျိုးကိုသိမ်းဆည်းထားရန်မလိုအပ်ပါ (စက္ကူကဒ်များသို့မဟုတ် IC ကဒ်များကဲ့သို့သော, စသည်တို့ကို), ရုံထိတွေ့အတူ, သငျသညျမှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်. လက်ဗွေရာတက်ရောက်သူစက်သည်လူ့လက်ချောင်းဇီဝဗေဒကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်, အများဆုံးအဆင့်မြင့်တက်ရောက်သူပစ္စည်းကိရိယာများ၏အချိန်နှင့်တက်ရောက်သူ software ကိုပေါင်းစည်း. ရိုးရာလာကြတယ်ကဒ်၏ချို့ယွင်းချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်, သံလိုက်ကဒ်, လာရောက်လည်ပတ်သူကဒ်ကိုယ်စား IC ကဒ်နှင့်အခြားတက်ရောက်မှုနည်းလမ်းများ, ကဒ်ဆုံးရှုံးမှု, တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်လူလုပ်အချက်များဖယ်ရှားပစ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း, အပြည့်အဝတရားမျှတမှု၏တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုရောင်ပြန်ဟပ်, မလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းအငြင်းပွားမှုများကိုရှောင်ရှားရန်.
တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွက်သင့်တော်သည် F-i60T လက်ဗွေ နှင့် F-i218 လက်ဗွေ သို့မဟုတ် Fingerprinter ၏အခြားမော်ဒယ်များ.
ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်အမျိုးမျိုး: TCP / IP, RS485 နှင့်ဒါ;
အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်, ဝေးလံသောအဆင်မပြေကွန်ယက် application များအတွက်သင့်လျော်သည်: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိုင်များကိုအောင်မြင်ရန် ဦး disk ကို, တက်ရောက်သူမှတ်တမ်းများ upload နှင့် download လုပ်ပါ;
ဘာသာစကားမျိုးစုံမီနူး: အင်္ဂလိပ်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, ဗီယက်နမ်လူမျိုး, စပိန်, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, ဂျာမန်, ရုရှား, တူရကီ, အီတလီ, ခကျြခကျြ, Arabic အဘိဓါန်, Persian နှင့်အခြားဘာသာစကားများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်;
Optical collector "ရုပ်ရှင်မြှင့်တင်ရန်" ပုံရိပ်အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့, ခြောက်သွေ့ပြီးစိုစွတ်သောလက်ချောင်းများကိုလက်ခံပါ, 360 ဒီဂရီလက်ချောင်းအသိအမှတ်ပြုမှုကိုထောကျပံ့, ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်;
မျက်နှာပြင် ၀ န်ထမ်းဌာနမှအချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြပေးသည်, နာမည်, မှတ်ပုံတင်နံပါတ်;
လုပ်ဆောင်ချက်အတော်များများ: အလိုအလျောက်ဒေတာကိုဖတ်ပါ, အလိုအလျောက် backup လုပ်ထား, အစီရင်ခံစာများ၏အလိုအလျောက်တွက်ချက်မှု, ချန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, လစာတွက်ချက်မှု, catering စီမံခန့်ခွဲမှု, ပုဂ္ဂိုလ်များစီမံခန့်ခွဲမှု;
စူပါပွဲ: ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသောလက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှုကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်: 3000,10000,30000,50000 လက်ဗွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်;
24 နာရီကြာမြင့်စွာအလုပ်, ပစ္စည်းကိရိယာများတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်;
လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသော Function key များ.
သင်၏ထုတ်ကုန် Time Attendance Management Solutions ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်
RFID မြေမြှုပ်ခံထားရသောမြေအောက်အမှတ်အသားသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်, RFID ကွန်ကရစ်တည်နေရာ Tag, RFID ဘိလပ်မြေ Tag ကို